एम्बुलेन्समा किन उल्टो (ECNALUBMA) लेखिन्छ? - ramechhapkhabar.com
एम्बुलेन्समा किन उल्टो (ECNALUBMA) लेखिन्छ?
तपाईले कहिले ध्यान दिनुभएको छ, एम्बुलेन्स (AMBULANCE) किन उल्टो (ECNALUBMA) लेखिन्छ ? तपाई सडकमा एम्बुलेन्स देख्नुहुन्छ तब तपाई निश्चित रूपमा ध्यान दिनुहुनेछ कि (ECNALUBMA) शब्द जस्तै किन लेखिन्छ भनेर ?
यो धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ। एम्बुलेन्समा उल्टो लेख्नुको कारण भनेको अघिल्लो सवारीसाधनका चालकले स्पष्ट पढ्न सकोस् भनेर हो। अगाडिको सवारी चालकले पछाडिको सवारीमा लेखिएका सुल्टो अक्षरहरू ‘लुकिङ्ग ग्लास’मा उल्टो देख्छन्। त्यसैले पनि एम्बुलेन्स आएको जानकारी दिनका लागि पनि उल्टो अक्षरमा ‘एम्बुलेन्स’ लेख्ने गरिएको हो।
सबैले सजिलै गरि चिन्न सकुन् भनेर यसको बेग्लै डिजाइन गरिएको हो। शब्द लामो हेर्न र पढ्न गाह्रो हुने भएकाले पनि यस्तो गरिएको हो। यति मात्र हैन कि मानिसले नदेखेको अवस्थामा साइरन सुनेर भए पनि बाटो छोड्ने भएकाले यसमा साइरन जोडिएको हुन्छ।
केटाहरुबाट बचाउन’ अबिवाहित १९ वर्षीया छोरीलाई ३ महिने सुई !
रोल्पा थवाङ्की १९ वर्षीया यु वती इस्मीता थापामगर (थर उही नाम परिवर्तित)ले पाँच वर्षदेखि लगातार तीन महिने संगीनी सुई लगाउदै आएकी छन् ।
नियत ठीक नभएका पुरुषहरुबाट जोगाउन ती युवतीलाई उनकै परिवारले गर्भ नि रोधक सुई लगाउने गरेको हो ।